မြ၀တီ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Monday, 25 March 2019 20:35 font size decrease font size increase font size
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးတို့ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ပြီး အခြေအနေမှန်များအား တွေ့ရှိခဲ့ရမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးများ ရောင်းဝယ်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ဖမ်းဆီးနှိမ်နင်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆက်လက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်မှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် အခြေအနေများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Read 502 times Last modified on Monday, 25 March 2019 20:37